Kalakhabar:: दिपालााई सेन्ट छरिएको लभ लेटर पनि आयो
दिपालााई सेन्ट छरिएको लभ लेटर पनि आयो
प्रकाशित मिति : Saturday, November 4, 2017
१८,कातिक, काठमाण्डौ, राजकुमार राई । दक्षिण कोरियाको सोल शहरमा हाले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ अवार्ड ‘ब्राइडल अवार्ड २०१७’ मा चौथो स्थान हासिल गर्ने नेपाली चेली हुन् सिम्रन खड्का । यो अवार्डमा उनले १९ देशका प्रतियोगी मोडललाई पछि पार्दै चौथो स्थानमा आएकी हुन् । उपाधिका साथमा ५० लाख कोरियान वन र मेडल समेत जित्न सफल उनी नेपालकै चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगीता मोडल हन्ट नेपालको यसै बर्षकी फष्टरनर अफ बिजेता पनि हुन् । कोरियाको अवार्डमा उपाधी विजेता बनेपछि विभिन्न अवसरको ढोका खुलेको बताउने उनलाई नाम चलेका केही निर्माताले चलचित्र अभिनय अफर समेत दिएका छन् । अभिनयमा हाम फालिहाल्ने सोच आफ्नो अहिले नभएको उनले बताइन् । यी नै बिषयमा उनीसंग गरिएको रमाईलो कुराकानी ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीता जितेर फर्किनु भएको छ । प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ र ?
– चारै तिरबाट तारिफ पाइरहेकी छु । आफूले कल्पना नगरेको उपलब्धी हात पर्दा उत्साहित पनि छु । अर्को कुरो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान पाए यो नै मेरा लागि ठूलो गौरवको विषय हो ।
सौन्दर्यतिर कतिको रुचि छ र ?
– सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिने गरेकी छैन । आफ्नो फेसमा जेजे सुट गर्छ, त्यो लगाउँने गरेकी छु । कुनै ब्राण्डका सामान फेसमा सुट गरेन भने त्यो प्रयोग गर्दिन । सन्सस्क्रिन, फाउन्डेसन र लिपिस्टीक लगायत मेकअफ मैले कहिलै नछुटाउने मेकअप हुन् ।
फेसनबारे के भन्नुहुन्छ र ?
– क्याजुअल ड्रेसमै हिँड्न रुचाउँछु । फेसनका हरेक पक्षसँग जानकार छु । फेसनका साइटहरु र ब्लगहरु फलो गर्छु । मलाई पाइन्ट, टिसर्ट, कुर्ता लगाउन सजिलो लाग्छ । टप्स र कुर्तामा पनि मलार्इं राम्रो देखिन्छ ।
फिट रहन के गर्नुहुन्छ ?
–मेरो खाने कुराको पनि सेडुल छ । बिहान ब्रेकफाष्ट हल्का लिन्छु । मध्यान्न १२ बजे तिर बिहानको खाना खान्छु । खानामा कहिले काही ब्वाइल्ड चिकेन खान्छु । ३,४ बजेतिर हल्का खाजा र राती हल्का खान लिएर सुत्छु ।
–हेर्दैमा लुक्स आकर्षक लाग्ने पुरुष जो केहीका लागि पनि राम्रो लाग्ने नै भयो । यसको अलवा केटीहरुलाई आदर गर्ने, मोडलिङमा सर्पोट गर्ने, पोजेटिभ सोच भएको पुरुष मेरो रोजाइमा पर्छ ।
प्रेम परेको छ कि छैन
– प्रेम छ पनि छैन पनि । यसको बारेमा अहिले नै भन्न मिल्दैन । पछि राम्रै तवरले खुलासा गरौला ।
पहिलो प्रेम प्रस्ताव कस्ले दियो ?
–कक्षा ६मा पढ्दै गर्दा सँगै पढ्ने एक साथीले नजिक आएर प्रेमको अफर राखेका थिए । त्यसपछि ९ कक्षामा पढ्दै गर्दा सँगै पढ्ने केटाले एक लभ लेटर दिए । लभ लेटरमा बास्ना आयोस् भनेर सेन्ट छरेका थिए ।
मन परेको चलचित्र रु
– हलिउड फिल्म ?
‘होटेल फर डग’ मन परेको छ । जनावर तिर धेरै रुचि भएकोले पनि यो चलचित्र मन परेको हो ।
डेटको लागि उपयुक्त ठाउँ ?
– शान्त ठाउँ होस् । आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न पाउने वातावरण होस् ।
खराब बानी छ कि ?
– चाँडो रिसाउने बानी छ । यो नै मेरो खराब बानी हो । मलाई पनि थाहा छ । घरमा मम्मीले पनि यही भन्नुहुन्छ । यो बानी सुधार्न खोज्छु, सक्दै सक्दिन ।